Mukhtaar Roobow Oo Ahaa Musharrax Madaxweynaha Koofur Galbeed Oo Baydhaba Lagu Xiray – Kalfadhi
Mukhtaar Roobow Oo Ahaa Musharrax Madaxweynaha Koofur Galbeed Oo Baydhaba Lagu Xiray
Sh. Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur), oo ka mid ah Musharixiinta Koofur Galbeed, ayaa goor dhaw la xiray. Ciidamada AMISOM ee jooga Baydhabo ayey wararku sheegayaan iney Sheekha dhigeen xabsiga. Warar dheeraad ah ayaa sheegaya in la jirdilay. Hadda waxaa Baydhaba, arrintaas darteed, ka socda rasaas, ay dadka deegaanku ku sheegeen dagaal.
Xaaladda Magaalada Baydhaba ayaa aad u adag, waxaana suxufiyiin ku sugan Baydhabo ay u sheegeen Kalfadhi iney dadku qalqalsan yihiin, dhaqdhaqaayadii dadka, ganacsiga iyo waxbarashadana ay hadda bilaabayaan iney istaagaan. Lama ogaan ilaa iyo hadda in rasaasta dhacaysa ay tahay dagaal leysaga soo horjeedo iyo haddii ay sidaas tahay cidda dagaalameysa.
Sarkaal ka tirsan Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, oo codsaday inaan la xusin magaciisa, ayaa u sheegay Kalfadhi in Musharrax Roobow la qabtay, xili uu gudaha u soo galay Madaxtooyada Koofur Galbeed, halkaan oo looga yeeray saakay isaga iyo Musharraxiinta Madaxweynaha Koofur Galbeed oo dhan. “Marka uu soo galay ayaa waxaa dharbaaxay askari Itoobiyaan ah, kadibna gacmaha ayaa laga xiray, waxaana la jirdilay laba ilaaladiisa ahayd” ayuu yiri sarkaalkaas.
Intaas waxa uu ku daray in saakay la sameynayey Jadwalka Dooraahada Madaxweynaha Koofur Galbeed, oo ay qeyb ka ahaayeen musharraxiinta oo uu ku jiro Roobow. Waxa uu sheegay iney maqleen in la jirdilay Wadaadka, oo ay jiraan dhaawacyo jir ahaaneyd oo soo gaaray. “Meel lagu xiray ma naqaan. In magaalada lagu dhex haayo iyo in la qaadayo ama la qaadayna ma ogin” ayuu sarlkaalkaas codsaday in la qariyo magaciisa ku yiri Kalfadhi.
Sh. Roobow, waxaa musharaxnimadiisa Madaxweynaha Koofur Galbeed ka taagneyd dood adag waayadaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha, ayaa la rumeysan yahay ineysan dooneyn inuu Roobow u tartamo jagada Madaxweynaha Koofur Galbeed, oo ay doorashadeeda ku beegan tahay 19-ka bishaan. Hase ahaatee, waxa uu Roobow taageero ka haystaa siyaasiin uu ka mid yahay Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Aragti: Dastuurka Dalka Iyo Xukuumadda Federaalka Ah Ee Soomaaliya
Xukumadda Soomaaliya Oo Ka Fekereysa Federaaleynta Maaliyadda Soomaaliya